ဓာတ်ပုံတွေသိမ်းဖို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဖို့ လပ်တော့မလိုတော့ဘူးဆိုရင်?? – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 4564 Views
ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလုပ်ပြန်ဆွဲဖို့ တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်ဖို့၊ Edit ပြင်ဖို့နဲ့ ဝေမျှဖို့အတွက် လပ်တော့ပ်သုံးစရာမလိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုများ ရှာကြည့်ခဲ့ဖူးကြလား? ဒါလေးအတွက်နဲ့ လပ်တော့ပ်တစ်လုံးကို သိန်းချီပေးပြီးဝယ်မယ့်အစား သေးငယ်အကြမ်းခံပြီး မိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုနဲ့တင် အလုပ်လုပ်လို့ရမယ့် Device လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ Gnarbox 2.0 SSD လို့ခေါ်ပြီး အကောင်းစား လပ်တော့ပ်တစ်လုံးလိုမျိုး Processing Power နဲ့ Storage Space ကိုရနိုင်တဲ့ ကျစ်လျစ်၊ အကြမ်းခံတဲ့ကိုယ်ထည်နဲ့ သွားလေရာယူသွားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။
Gnarbox 2.0 SSD ရဲ့အတွင်းထဲမှာတော့ Quad-Core 2.4 GHz ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM 4GB, storage 1TB, လဲလှယ်နိုင်တဲ့ဘက်ထရီ၊ 300Mb/s အမြန်နှုန်းနဲ့ WiFi ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ body ကတော့ ဖုန်၊သဲ၊ရေစို၊အပူဒဏ်အားလုံးကိုခံနိုင်တဲ့ IP67 နဲ့လာပါတယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါ လပ်တော့ပ်သယ်သွားဖို့အဆင်မပြေတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေ ဗီဒီယိုသမားတွေအတွက် ပုံတွေ Edit လုပ်နိုင်မယ့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အပြင် back-up လုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူတဲ့ SSD လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
One-Touch Backup : ဖုန်းတွေ တက်ဘလက်တွေမလိုပဲနဲ့ Device ရဲ့ OLED screen တွေ ခလုတ်တွေကနေပဲ အလွယ်တကူ Back-up လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Preset Folder Tree : စုစည်းထားတဲ့ Back-Up ဖိုင်တွေအတွက် Folder Tree ကနေ ပြန်ရယူနိုင်ပါတယ်။
75MB/s to 450MB/s Transfer : Backup လုပ်တဲ့အခါ SD ကဒ်ပေါက်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် 75MB/s အမြန်နှုန်းနဲ့လုပ်နိုင်ပြီး USB-C နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ 450MB/s အမြန်နှုန်းနဲ့တောင် BackUp လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Safekeep, Selects, Sequence နဲ့ Showcase ဆိုတဲ့ မိုဘိုင်းလ် Appliction အသစ်လေးခုကိုလည်းဖန်တီးထားပါသေးတယ်။ ဒီ device လေးရဲ့ အသုံးပြုပုံကလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။ SD ကဒ်ကိုထည့်ပြီး ခုနက မိုဘိုင်းလ် App ၄ခုနဲ့ကြိုက်သလိုသုံးနိုင် Back-Up လည်းလုပ်နိုင်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ပုံတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်အောင် Adobe Lightroom, LumaFusion, DropBox, Adobe Premiere စတာတွေနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ထားပေးပါသေးတယ်။ aအာက်မှာ ဗီဒီယိုလေးပြထားပါသေးတယ် 😉
ရိုက်ထားသမျှ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွေအတွက် SD ကဒ်နဲ့ ဒီစက်လေးနဲ့ ဖုန်းသို့မဟုတ် တက်ဘလက်၁လုံးရှိရုံနဲ့တင် ပုံတွေသိမ်း၊ BackUp လုပ်၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံသမားတွေ သွားလေရာ လပ်တော့ပ်တစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်စရာ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ ကိုယ်နဲ့အတူသွားလေရာမှာသယ်သွားနိုင်မယ့် ဒီ Gnarbox 2.0 SSD မိုဘိုင်းလ် မီဒီယာ ပရိုဆက်ဆာလေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်း နောက်တစ်ပတ်ရဲ့အသစ်အဆန်းပစ္စည်းလေးတွေကို စောင့်မျှော်လိုက်ရအောင်…
ကိုယျ့ရဲ့ဓာတျပုံတှေ ဗီဒီယိုတှကေို ဒေါငျးလုပျပွနျဆှဲဖို့ တဈစုတဈစညျးတညျးဖွဈဖို့၊ Edit ပွငျဖို့နဲ့ ဝမြှေဖို့အတှကျ လပျတော့ပျသုံးစရာမလိုတဲ့နညျးလမျးလေးတဈခုမြား ရှာကွညျ့ခဲ့ဖူးကွလား? ဒါလေးအတှကျနဲ့ လပျတော့ပျတဈလုံးကို သိနျးခြီပေးပွီးဝယျမယျ့အစား သေးငယျအကွမျးခံပွီး မိုဘိုငျးလျအကျပလီကေးရှငျး တဈခုနဲ့တငျ အလုပျလုပျလို့ရမယျ့ Device လေးတဈခုအကွောငျးပွောပွခငျြပါတယျ။
သူ့ရဲ့နာမညျကိုတော့ Gnarbox 2.0 SSD လို့ချေါပွီး အကောငျးစား လပျတော့ပျတဈလုံးလိုမြိုး Processing Power နဲ့ Storage Space ကိုရနိုငျတဲ့ ကဈြလဈြ၊ အကွမျးခံတဲ့ကိုယျထညျနဲ့ သှားလရောယူသှားနိုငျတဲ့ပစ်စညျးလေးပါ။
Gnarbox 2.0 SSD ရဲ့အတှငျးထဲမှာတော့ Quad-Core 2.4 GHz ပရိုဆကျဆာ၊ RAM 4GB, storage 1TB, လဲလှယျနိုငျတဲ့ဘကျထရီ၊ 300Mb/s အမွနျနှုနျးနဲ့ WiFi ကိုတှရေ့မှာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ body ကတော့ ဖုနျ၊သဲ၊ရစေို၊အပူဒဏျအားလုံးကိုခံနိုငျတဲ့ IP67 နဲ့လာပါတယျ။ ခရီးသှားတဲ့အခါ လပျတော့ပျသယျသှားဖို့အဆငျမပွတေဲ့ ဓာတျပုံဆရာတှေ ဗီဒီယိုသမားတှအေတှကျ ပုံတှေ Edit လုပျနိုငျမယျ့ ပရျောဖကျရှငျနယျဆော့ဖျဝဲလျတှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့အပွငျ back-up လုပျရတာလညျး လှယျကူတဲ့ SSD လေးတဈခုဖွဈပါတယျ။
One-Touch Backup : ဖုနျးတှေ တကျဘလကျတှမေလိုပဲနဲ့ Device ရဲ့ OLED screen တှေ ခလုတျတှကေနပေဲ အလှယျတကူ Back-up လုပျပေးနိုငျပါတယျ။
Preset Folder Tree : စုစညျးထားတဲ့ Back-Up ဖိုငျတှအေတှကျ Folder Tree ကနေ ပွနျရယူနိုငျပါတယျ။
75MB/s to 450MB/s Transfer : Backup လုပျတဲ့အခါ SD ကဒျပေါကျကိုသုံးမယျဆိုရငျ 75MB/s အမွနျနှုနျးနဲ့လုပျနိုငျပွီး USB-C နဲ့လုပျမယျဆိုရငျတော့ 450MB/s အမွနျနှုနျးနဲ့တောငျ BackUp လုပျနိုငျပါတယျ။
Safekeep, Selects, Sequence နဲ့ Showcase ဆိုတဲ့ မိုဘိုငျးလျ Appliction အသဈလေးခုကိုလညျးဖနျတီးထားပါသေးတယျ။ ဒီ device လေးရဲ့ အသုံးပွုပုံကလညျး ရိုးရှငျးပါတယျ။ SD ကဒျကိုထညျ့ပွီး ခုနက မိုဘိုငျးလျ App ၄ခုနဲ့ကွိုကျသလိုသုံးနိုငျ Back-Up လညျးလုပျနိုငျပွီး သိမျးထားတဲ့ပုံတှကေိုစိတျကွိုကျပွငျနိုငျအောငျ Adobe Lightroom, LumaFusion, DropBox, Adobe Premiere စတာတှနေဲ့လညျး ခြိတျဆကျထားပေးပါသေးတယျ။ aအာကျမှာ ဗီဒီယိုလေးပွထားပါသေးတယျ 😉
ရိုကျထားသမြှ ဓာတျပုံ ဗီဒီယိုတှအေတှကျ SD ကဒျနဲ့ ဒီစကျလေးနဲ့ ဖုနျးသို့မဟုတျ တကျဘလကျ၁လုံးရှိရုံနဲ့တငျ ပုံတှသေိမျး၊ BackUp လုပျ၊ စိတျကွိုကျပွငျနိုငျမယျဆိုတော့ ဓာတျပုံသမားတှေ သှားလရော လပျတော့ပျတဈလုံးနဲ့ အလုပျရှုပျစရာ သိပျမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတဈပတျအတှကျတော့ ကိုယျနဲ့အတူသှားလရောမှာသယျသှားနိုငျမယျ့ ဒီ Gnarbox 2.0 SSD မိုဘိုငျးလျ မီဒီယာ ပရိုဆကျဆာလေးကို မိတျဆကျပေးလိုကျရငျး နောကျတဈပတျရဲ့အသဈအဆနျးပစ်စညျးလေးတှကေို စောငျ့မြှျောလိုကျရအောငျ…